ဖိုင် Format | November 2019
Launcher.exe ဟာ executable files တွေကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့် run ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ပြဿနာများရှိသည်ထားတဲ့ EXE ဖိုင်ပုံစံနှင့်အတူရှိ, ဤများအတွက်အကြောင်းပြချက်အများအပြားဖြစ်နိုင်သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ Launcher.exe application ကိုအမှားမှဦးဆောင်အဓိကပြဿနာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူတို့ကိုဆုံး၏နည်းလမ်းများစဉ်းစားပါ။
အဆိုပါ FLV ကိုဗီဒီယို Format ကိုဖွင့်ပါ
Format FLV (Flash ကိုဗီဒီယို) အဓိကအား browser ကိုတဆင့်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းမီဒီယာကွန်တိန်နာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးကဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါမှအစီအစဉ်များကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုကကစားသမားများနှင့်အခြား application များနှင့်အတူဒေသခံကြည့်ရှု၏ဤလိမ်းပြဿနာနှင့် ဆက်စပ်. ။
ပွင့်လင်းဖိုင် format နဲ့ WLMP
တိုးချဲ့မှု WLMP နှင့်အတူ files Movie Maker Windows Live အတွက်လုပ်ငန်းများ၌ခံရဖို့စီမံကိန်းအတွက်ဒေတာကိုတည်းဖြတ်ထားပါသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့ format ကိုဘယ်လို, သင်ကဖွင့်လှစ်နိုင်မလားပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီ resolution ကိုအနည်းဆုံး WLMP-file ကိုတကယ်တော့ file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုကြောင့် Movie, ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုဖန်ဆင်းရုပ်ရှင်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များတိုက်ရိုက် windose ပါရှိသည်သော XML ကို-စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်း JPG image ကို format နဲ့
ဖြစ်ကောင်းအသုံးအများဆုံးပုံစံပုံရိပ်ကြောင့် data ကိုချုံ့နှင့် display ကိုအရည်အသွေးကို၏ဒီဂရီအကြားအကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာမှလူကြိုက်များရရှိခဲ့သည့် JPG, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဤ extension ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်တချို့ software ကိုဖြေရှင်းချက်၏အကူအညီနှင့်အတူထွက်ရှာတွေ့ကြပါစို့။ အခြားမည်သည့်ဂရပ်ဖစ် format ရဲ့အရာဝတ္ထုအဖြစ် JPG နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲ, JPG ပုံရိပ်များအတွက်အထူး applications များနှင့်အတူကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
ASPX တိုးချဲ့ ASP.NET နည်းပညာကို အသုံးပြု. တီထွင်ခဲ့သည့်တစ်ဦးက Web page file ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လက္ခဏာအင်္ဂါရပ်စားပွဲဖြည့်စွက်ဥပမာ, ကို web ပုံစံများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုများသောပွင့်လင်း format ကိုဤ extension နှင့်အတူစာမျက်နှာဖွင့်လှစ်မယ့်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
PDF ဖိုင်မှကို DOC ပြောင်း
လူကြိုက်အများဆုံးအီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းပုံစံများတစ်ခုမှာကို DOC နှင့် PDF ဖြစ်ကြသည်။ ရဲ့ကျွန်တော် PDF ကိုမှကို DOC ဖိုင်တွေကို convert လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။ ကူးပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းများအဆိုပါ MLC ၏ပုံစံနှင့်အတူအလုပ်လုပ် software ကိုသုံးပြီးနှင့်အထူးအစီအစဉ်များ-converters အဖြစ်လျှောက်ထားခြင်းအဖြစ် PDF ကိုမှကို DOC နိုင်ပါတယ်ပြောင်း။
တစ်ဦး VHD အတွက်ပွင့်လင်းဖိုင်တွေ
တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးကို PC တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအဓိက OS ကိုထဲကစီမံခန့်ခွဲမျိုးစုံတဲ့ operating systems ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ က virtual hard disks ကိုဤခဲ VHD ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ ဒီနေ့ဖိုင်တွေ၏ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုး၏ပုံကိုဖွင့်လှစ်အကြောင်းကိုပြောပြပါ။ VHD Format ကို VHD ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ် "Virtual Hard Disk ကို" အဖြစ် decodes, ကွဲပြားခြားနားသော OS ကိုဗားရှင်း, ပရိုဂရမ်နဲ့တခြားဖိုင်တွေသိမ်းထားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
SRT (SubRip စာတန်းထိုးဖိုင်မှတ်တမ်း) - ဗီဒီယိုပေါ်တွင်သိမ်းထားသည့်ပုံစံကိုစာသားဖိုင်တွေ။ စာတန်းထိုးတစ်ကြိတ်စက်နှင့်အတူဖြန့်ဝေ, ထိုသို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသငျ့သညျအခါသတ်မှတ်ရေးအချိန်ကာလနှင့်အတူစာသားများပါဝင်ကြသည်။ ဗွီဒီယိုပြန်ကျော့မှမသုံးပဲ, စာတန်းထိုးကြည့်ရှုရန်ရှိတစ်လမ်းလား?
AVI မှ H.264 format ကိုမှဗီဒီယို converting
H.264 တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သော extenstion နဲ့ files ဗီဒီယိုတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သူတို့ကို View ခက်ခဲသည်မဟုတ်, ပုံစံသူ့ဟာသူနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်အထူးအသုံးဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအခြေအနေကိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ဦးထက်ပိုသောဘုံက AVI မှပြောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ H.264 ဗီဒီယို-ပြောင်းလဲခြင်းနည်းလမ်းများအိပ်ချ်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
CorelDraw တဦးတည်းဗားရှင်းသို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအဆိုပါ CDR စာရွက်စာတမ်းများ, ကန့်သတ် format နဲ့ထောက်ခံမှုကြောင့်ယေဘုယျအားအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားကြသည်မဟုတ်။ ဒီ AI အများပါဝင်သောအခြားဆင်တူ extension ကိုမှပြောင်းလဲခြင်းလိုအပ်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Next ကိုကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်တွေကို convert အရှိဆုံးအဆင်ပြေနည်းလမ်းမှာကြည့်ပါ။
ပွင့်လင်း DMP dumps
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကဤဖိုင်များကိုဖွင့်နိုင်သည်ကိုလျှောက်လွှာရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးချင်သောကွောငျ့ကို Windows operating system မြား၏တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏပုံစံအတွက် DMP ဖိုင်တွေနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြသည်။ စနစ်သို့မဟုတ် developer များထပ်မံဒီဘာဂင်များအတွက်လိုအပ်မယ့်သီးခြားလျှောက်လွှာတစ်အချို့အချက်မှာပုံရိပ်တွေကို RAM ကအခြေအနေ: DMP DMP ဖွင့်လှစ်ဘို့ expansion ရွေးချယ်စရာမှတ်ဉာဏ်အမှိုက်ပုံဖိုင်များကို reserved ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ KMZ format ကိုဖွင့်ပါ
KMZ ဖိုင်တည်နေရာတစ်ခုအပေါ်ထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်အဖြစ် geolocation ဒေတာ, ပါရှိသည်နှင့်မြေပုံ application များအတွက်အများအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များသည်အသုံးပြုသူများလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝေမျှနိုင်ပြီး, ဒါကြောင့်, ဒီ format နဲ့ဖွင့်လှစ်၏မေးခွန်းကိုအရေးကြီးပါသည်။ ဒါနည်းလမ်းများ, ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ KMZ နဲ့အလုပ်ကိုထောကျပံ့ပေးသောဘယ်လို Windows ကို applications များ, ဖော်ပြသည်။
PNG format ကို PDF ကိုပြောင်း
Image ကိုဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းဖို့ PNG ၏ချဲ့ထွင်ကျယ်ပြန့်သည့်ပုံနှိပ်ခြင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ မကြာခဏလွယ်ကူသောဖြန့်ဖြူးဘို့ PDF ကိုမှပုံရိပ်များတင်ဆက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။ ထို့အပြင်ပုံနှိပ်လယ်ပြင်၌အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများ, PDF ဖိုင် format နဲ့အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလိုအလျောက်လည်ပတ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
က MP3 format နဲ့မှ M4B အော်ဒီယိုစာအုပ်များ converting
တိုးချဲ့မှု M4B အသံဖိုင်စာအုပ်များ၏သိုလှောင်မှုအတွက်အထူး created တစ်မူထူးခြားတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အတူ files Apple ရဲ့ Device များပေါ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ Next ကိုကျနော်တို့ပိုပြီးလူကြိုက်များက MP3 format နဲ့နည်းလမ်းများ M4B ပြောင်းလဲခြင်းဆှေးနှေးပါမညျ။ M4B ချုံ့နည်းလမ်းနဲ့နားထောင်၏နည်းလမ်း၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက် M4A format နဲ့အတူဘုံ၌များစွာသောရှိသည် extenstion နဲ့ MP3 ကိုအသံဖိုငျမြားမှ M4B သို့ပြောင်းလဲပါ။
ပွင့်လင်း tmp ဖိုင်တွေ
(ယာယီ) tmp - ဤတစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသော program တစ်ခုအမျိုးအစားများကိုဖန်တီးယာယီဖိုင်တွေနေသောခေါင်းစဉ်: စသည်တို့ကိုစာသားနဲ့ tabular ပရိုဆက်ဆာ, browser များ, operating system ကို, သငျသညျအကြိုးရလဒျကိုကယ်တင်နှင့်လျှောက်လွှာကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအများဆုံးကိစ္စများတွင်ဤအရာဝတ္ထုကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နေကြသည်။ ခြွင်းချက်တခုကို browser ကို cache ကို (ပြုလုပ်ထားအဆာအသံအတိုးအကျယ်အဖြစ်သန့်စင်သည်) ဖြစ်ပြီး, မမှန်ကန်သောပရိုဂရမ်များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖိုင်များကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
DjVu format နဲ့တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းပုံနှိပ်
အတော်များများကစာအုပ်များနှင့်အထွေထွေစာရွက်စာတမ်းများအတွက် DjVu format နဲ့ဖြန့်ဝေသည်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့သညျဤပြဿနာကိုအများဆုံးအဆင်ပြေဖြေရှင်းချက်ရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့ကိစ္စများတွင်, သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်း print ထုတ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများကိုဖွင့်နိုင်သော DjVu အများစုမှာအစီအစဉ်များပုံနှိပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့မိမိတို့ဖွဲ့စည်းမှု tool ကိုအတွက်ဆံ့။
ကစားသမားသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ PC hard drive ကိုမှ, ဖုန်းမှသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် - ဂီတ၏အွန်လိုင်းဖြန့်ဖြူး၏လူကြိုက်များနေသော်လည်းများစွာသောအသုံးပြုသူများကအဟောင်းလမ်းပေါ်တွင်သင်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများနားထောင်ရန်ဆက်လက်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှမှတ်တမ်းများအများစုချို့ယွင်းချက်အားနည်းချက်တွေကို Volume ကိုရှိပါတယ်ရသောအကြား, MP3-format နဲ့ဖြန့်ဝေနေကြသည်: တစ်ခါတစ်ရံလမ်းကြောင်းများလွန်းတိတ်ဆိတ်အသံ။
ပွင့်လင်းမထသ format နဲ့
မထသ (သို့မဟုတ် MHTML) format နဲ့ web page များကိုတစ်ဦး archive ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အရာဝတ္ထုတဦးတည်းဖိုင်ထဲမှာဆိုဒ်၏ browser ကိုစာမျက်နှာထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ applications များမထသ run နိုင်ပါတယ်, ကကဘာလဲဆိုတာနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ပုံစံမထသ manipulate မှမထသနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့အစီအစဉ်ကိုအဓိကအားဖြင့် browser များရည်ရွယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းစွာမဟုတ်ဘဲအားလုံးက်ဘ်ဘရောက်ဇာက၎င်း၏စံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမှတဆင့်ဤ extension နှင့်အတူအရာဝတ္ထုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဖွင့်လှစ် format နဲ့ဖိုင်တွေ BUP
BUP အဆိုပါ IFO ဖိုင်ထဲတွင်ပါရှိသောသော menus တွေအခန်းကြီး, စာတန်းထိုးနဲ့ DVD ကိုခြေရာခံပေါ်တွင် backup လုပ်ထားသတင်းအချက်အလက်များသည်။ ဒါဟာ DVD-Video format ကိုရည်ညွှန်းခြင်းနှင့် VOB နှင့် VRO အတူလုပ်ကိုင်နေသည်။ အများအားဖြင့် directory ကို« VIDEO_TS »မှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောပျက်စီးလျှင်၎င်းသည်အစား IFO ၏သုံးနိုင်တယ်။
အခုတော့အများအပြားကွန်ပျူတာများပြီးသား gigabytes ရာပေါင်းများစွာကနေအများအပြား terabytes ဖို့အရွယ်အစားအထိ hard drive တွေဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီ megabyte ကအခြားကွန်ပျူတာများမှသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်စာရှောင်မှကြွလာအထူးသဖြင့်အခါ, အဖိုးတန်သည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့မကြာခဏလိုအပ်ပေသည်။